Dagaal culus oo twitter-ka ku dhex maray Erdogan iyo Benjamin Netanyahu | Arrimaha Bulshada
Home News Dagaal culus oo twitter-ka ku dhex maray Erdogan iyo Benjamin Netanyahu
Dagaal culus oo twitter-ka ku dhex maray Erdogan iyo Benjamin Netanyahu
Monday, December 24, 2018 News
Bulsha:- Dalalka Turkiga iyo Israel ayaa isdhaafsaday weerarro saxaafadda ah kaddib markii ay Ankara ku eedeysay Israel HAYSASHADA dhulka Falastiiniyiinta, halka Tel Aviv ay iyaduna ku eedeeysay Turkiga xasuuqa Kurdiyiinta iyo HAYSASHADA Qubrus.
Ra’isul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu weeraray Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaas oo dhallinyaro Turki ah u sheegayey “Ha laadina cadawga aad dhulka dhigtaan. Ma tihiin Yahuudda joogta Israel.”
Netanyahu waxa uu ugu jawaabay Erdogan: “Haysashada Waqooyiga Qubrus kaas oo ay ciidamadiisu gummaadaan haweenka iyo carruurta Kurdiyiinta ah, kudaha iyo dibadda Turkiga”, waxaa sidaas lagu soo qoray Twitter-kiisa Sabtidii.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Turkiga oo ka jawaabaya Twitter-ka Israel ayaa Axaddii yiri: “Netanyahu waa dilaa qarsoon oo waqtigan casriga ah.”
Afhayeenka Erdogan ahna la taliyihiisa Ibrahim Kalin ayaa isna jawaab adag soo bixiyey.
Waxa uu yiri afhayeenka: Netenyahu –“Ha joojiyo sharci daradda uu ku haysto dhulka Falastiiniyiinta iyo caburrinta adag ee uu ku hayo dadka Falastiiniyiinta ah,” halkii uu ka baryi lahaa Erdogan in uusan runta ka hadlin.”
“Weerarka Erdogan ama u adeegsiga Kurdiyiinta guulo siyaasadeed kama badbaadin doonto dhibaatooyinka ka haysta gudaha,” ayuu Kalin hadalkiisa ku daray.
Bilowgii bishan waxa uu Erdogan ku misaalay xadgudubyada ay Israel ku hayso Falastiiniyiinta kuwii ay Nazi-yiinta Jarmalka ku sameyn jireen Yuhuudda.
Waxa uu sheegay in Falastiiniyiinta lagu hayo cadaadis, dagaal iyo cabsi galin iyo siyaasado aan ka dhibaato yareyn tii lagu samaeeyey Yuhuudda xilligii uu socday dagaakii labaad ee aduunka.”
Turkiga waxa ay xiriirka u jareen Israel 2010-kii kaddib markii ay Yuhuudda ciidamadooda Kumaandooska ah ay waraareen Markab dagaal oo ay leeyihiin Turkida oo joogay meel u dhaw Marinka Qasa iyaga oo ku dilay sagaal Turki ah.
Labada dhinac waxa ay hadana danjireyaal is weydaarsadeen 2016 balse waxaa markale safiirkeeda la soo laabatay Ankara bishii Maajo kaddib markii ay Militariga Israel Marinka Qasa ku dileen dibad baxayaal Falastiiniyiin ah.